Google Chrome ကိုမကြာခင်စကားဝှက်တွေတင်ပို့လိမ့်မယ် Androidsis
အက်ဒါဖာရီနို | | NOTICIAS, လဲ tutorial
Google Chrome သည် Android ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် browser ၏အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည့်အပြင်သုံးစွဲသူများကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် Google မှဖြစ်ခြင်းသည်၎င်းကို Android ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။ ဖြည့်စွက်ကာ သငျသညျအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်တိုးမြှင့်မှုများနှင့်အတူခပ်သိမ်းသောကာလပတ်လုံးနောက်ဆုံးပေါ်ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ ယခုတွင် browser သို့တိုးတက်မှုတစ်ခုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သည်။
una စကားဝှက်များကိုစီမံရန်နည်းလမ်းသစ်မကြာမီ Google Chrome။ အနည်းဆုံးတော့ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဘယ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတာကို Android ပေါ်ရှိ browser ၏ကုဒ်ကညွှန်ပြနေတယ်။ ဒါဟာဘာလဲ?
ဂူဂဲလ်ကစကားဝှက်တင်ပို့တဲ့ကိရိယာတခုကိုအလုပ်လုပ်နေတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုမည့် function တစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာစီမံနိုင်သည်။ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုစီ၌မတူညီသောစကားဝှက်များကိုအသုံးပြုသောအသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
စိတ်ကူးကထွက်လှည့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ စကားဝှက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသည် ငါတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါတို့ရှိနေတယ်။ ဒါ့အပြင်အဲဒါပုံရသည် Google Chrome ကဖိုင်တစ်ခုထုတ်ပေးလိမ့်မယ် ဘယ်မှာတွေ့နိုင် ဝဘ်စာမျက်နှာများအားလုံး password များနှင့်အတူ။ ၎င်းသည်၎င်း၏စွန့်စားမှုများရှိသော်လည်းအလွန်အသုံးဝင်သောအရာ။ ၎င်းဖိုင်အမျိုးအစားကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်များအားလုံးကိုဖိုင်တစ်ဖိုင်တည်းဖြင့်ထားခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါကအကျိုးဆက်များဆိုးဝါးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်မည်ကိုမသိရသေးပါ Google က Chrome ကို။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ကုမ္ပဏီနှင့် ပတ်သက်၍ ဤအချက်အလက်နှင့် ပတ်သတ်၍ ပိုမိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်စောင့်ဆိုင်းရမည်။
အဘယ်အရာကိုမျှသူသည်မိမိရောက်ရှိအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် Google Chrome ၏ beta ဗားရှင်းများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်တည်ငြိမ်သော version များသို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဘရောင်ဇာသည်၎င်း၏လည်ပတ်မှုကိုတိုးတက်အောင်ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်မှာသေချာပါသည်။ ဤကိရိယာမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရပါလိမ့်မည်. မင်းဒါကိုဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Google Chrome ကသင့်အားစကားဝှက်များကိုတင်ပို့ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
'clamshell' ဖုန်းအသစ်ကို Samsung တွင် W2018 အမည်ရှိတရုတ်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ကြေညာခဲ့သည်